DAAWO SAWIRO:- Xuska Calanka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- Xuska Calanka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
DAAWO SAWIRO:- Xuska Calanka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Oct 12, 2017:- Munaasabad lagu maamuusayay Maalinta Calanka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo Mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo dhalinyaro ay ka qeyb galeen munaasabadan Calanka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo munaasbada ka hadlay ayaa sheegay in halgan dheer loo soo maray sidii calan Soomaaliyeed loo heli lahaa, isagoo u duceeyay dhalinyaradii halganka u soo galay xornimada dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa Hambalyo u diray 63 guuradii ka soo wareegatay markii la taagay calanka Soomaaliyeed, isagoo caddeeyay in calanka Soomaaliya uu yahay astaanta qaranka dalka Soomaaliya.
Munaasabadan maalinta Calanka Soomaaliyeed ee 12 October ayaa ah maalin la xuso,waxaana munaasabadaan ka dhacday magaalada Muqdisho ay aheyd mid ka duwan kuwii horay uga dhacay magaalada Muqdisho.
AKHRISO:- Maamul goboledyada dalka oo la wareegay awoodi Baarlamanka Aqalka Sare